Non - go'yaha leh tolmo wanaagsan qalabka caafi - Shiinaha Yixin
SMS dhar non-leh tolmo wanaagsan (15g - 100 g / m2): isticmaalo ilaalinta saddex dhinac-cabbir ka dhanka ah kooxda baxsiga, daahan yar iyo waxqabadka caqabad wanaagsan.
Jaan-xidhkii hore dhar dhexda - Non (45g - 70g / m2): isticmaalo xafaayadda ilmaha balastar hore halkii ay ku xoqeen ayay maro. Waa jilicsan oo xasilloon, kharash yar iyo xiisad wanaagsan, oo ku siin kara daabacayaa kala duwan sida ay shuruudaha macaamiisha ee.
Dhar laastikada waistline non-leh tolmo wanaagsan waa dareenka wanaagsan, raaxo badan oo ku dhow taam badan sida caadiga ah.
Non - dhar leh tolmo wanaagsan ka tagay iyo dhegahooda midig / dhegaha laastikada (50g - 120 g / m2): isticmaalo xafaayadda ka tagay iyo dhegahooda midig, xoog jiidaya wanaagsan, raaxo badan, u dhaw habboon iyo heer ka sarreeya caadi. Saddex - lakabka weecinta dhar non-leh tolmo wanaagsan cabbir ah (20g - 40g / m2): isticmaalo difaan nadaafada iyo layers weecinta, la leexsado si degdeg ah, ingriiska dambe yar oo dusha ka qalleyl badnayd.
Saddex - dhar non-leh tolmo wanaagsan dalool waji leh: isticmaalo on layers dusha of xafaayadda iyo suufka caadada ah, oo leh saamayn dheeraad ah rikoor, kala firidhsan dheeraad ah, hydrophilicity wanaagsan iyo dareenka gacanta jilicsan badan sida caadiga ah.
Non-leh tolmo wanaagsan dhar Super jilicsan hoose farcan (14g - 20g / m2): isticmaalo farcan ugu hooseysa xafaayadda iyo suun. Waxa uu dareensan yahay jilicsan iyo raaxo sida maqaarka, ayaa qaab ciyaareed wanaagsan kala ooday, oo waxaa laab daryeelo.
Dhar Hydrophilic jilicsan non-leh tolmo wanaagsan (12g - 25g / m2): isticmaalo lakabka dusha permeable ee xafaayadda iyo maradii caafi. Waxaa loo isticmaali karaa feer iyo duubaya halkii warqad xoog qoyan.
Duub dhar non-leh tolmo wanaagsan hydrophilic: Waxaa loo isticmaalaa bedeli warqad xoog qoyan la jiido ee wanaagsan.
Non --xidhkii dhar (12 - 260g / m2) la daaweyn gaar ah sida udgoonka, miraha shaaha, Hadeydaan saliid lagama maarmaan, iwm waxaa loo isticmaalaa on dusha sare ee suufka iyo xafaayadda si aad u fiican oo gaar ah.
Previous: Hot - duubay (ES) difaan non-leh tolmo wanaagsan
Next: dhar non-leh tolmo wanaagsan Medical